ဟူနန် (တရုတ်: 湖南; ပင်ရင်: Húnán)သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတောင်ဖက်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်တွင်ယန်ဇီမြစ်အလယ်ပိုင်း ၊ သုန်းထင်းကန်တောင်ပိုင်းတို့နှင့်ထိစပ်နေသောကြောင့် ဟူနန် (ကန်၏တောက်ဘက်) ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်။. ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသော ရှန်းမြစ်ကို အစွဲပြု၍ ဟူနန်ပြည်နယ်ကို အတိုကောက် ရှန်း "湘" (pinyin: Xiāng) ဟုလည်း ခေါ်သည်။
တမ်းပလိတ်:Infobox PRC province
(တရုတ်) Origin of the Names of China's Provinces, People's Daily Online.
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
RightSite.asia | Changsha National Economic and Technology Development Zone
RightSite.asia | Chenzhou Export Processing Zone
RightSite.asia | Zhuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone